Cumar Cabdirashiid Sharmaarke , oo farmaajo baaq u diray. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Cumar Cabdirashiid Sharmaarke , oo farmaajo baaq u diray.
Cumar Cabdirashiid Sharmaarke , oo farmaajo baaq u diray.
Ra’isal wasaarihii hore ee dawladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke, ayaa ceeb ku tilmaamay xafiiska maran ee Ra’iisul wasaaraha oo weli aan la soo magacaabin masuulkii beddeli lahaa Xasan Cali Khayre oo hadda u sharraxan xilka madaxweyne ee Jamhuuriyadda Federaalka ah.
Waxaa uu sheegay in arrinkani uu dhaawac wayn ku yahay heshiisyada lagu gaari doono shirka arrimaha doorashooyinka ee kasocda Muqdisho.
Senator Cumar Cabdirashiid, waxa uu madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuusan ku xadgudbin nidaamka dowladnimada iyo awood qeybsiga isla markaana uu si deg deg ah kusoo magacaabo raysal wasaare ka qeyb qaata jaangoynta siyaasadeed ee haatan ka socota caasimadda dalka ee Muqdisho.
” Inuu raysal wasaaruhu miiska ka maqan yahay, waxay dhaawac ku tahay dowladnimada Sooomaaliya, ujeeddada uu madaxweynuhu ka leeyahayna, waa in raysal wasaaraha dusha laga saarayo waxyaabo uusan talo iyo tusaale ku lahayn, markuu lagu fashilmana isaga dusha laga saaro masuuliyaddaas.” Ayaa yiri Cumar Cabdirashiid oo u warramayay Telefeshinka Dalsan.
Waxa uu maalmul goboleeddada kula taliyay in kaalintooda ay ka qaataan xaaladda siyaasadeed ka jirta dalka.
Dhinaca kale, Cumar Cabdirashiid ayaa dowlad goboleedyada ku dhaliilay inay kaalin ku leeyihiin xaalada siyaasadeed ee dalku maanta marayo, isagoo tilmaamay in goor hore laga rabay inay dowladda kula xisaabtamaan waxyaabaha hadda laga doodayo.
Magacyada 5 macallin Qur'aan oo lagu laayay degmada Cadalle ee Shabeellaha dhexe.
Qarax loo dhigay guddoomiyaha maxkamadda Ciidammada oo lafashiliyay
Baarlamaanka Hirshabelle oo muddo xilileedkooda ka dhigtay 5 sano